IsiGqeba soQeqesho seCCPP esigqibeleleyo
Kutheni kubalulekile ukuba umntu afunde i-CCNP?
Kutheni iCCNA imfuneko kwiCCPP?
Izibonelelo zeeCenter Certification
I-Cisco Certified Network Professional (CCNP) yinqanaba elichanekileyo lokuqinisekiswa kwiCisco. Liye laguqula ngokukhawuleza libe yisatifiketi esisisiseko kwihlabathi lequmrhu ngokuphathelele kwizikhokelo zolawulo. Ngokucoca esi siqinisekiso sithemba ukukwazi ukuqhuba izixhobo zakhe zokulawula kwaye zize zifaneleke ngakumbi ukusebenza phakathi kweengcali ezikwazi ukujongana nemiba engxaki kwinkqubo yolawulo. Ithemba kufuneka libe yi-CCNA R & S efanelekileyo ukufumana olu qeqesho loqeqesho, kunye nokubandakanyeka kwe-1 kunyaka lokulawula kuya kuba yimbono eyongeziweyo.
Ukuba unomdla kwi-Networking, i-CCNP-CCNA iyona nqanaba elihle lokufunda ukulungiselela. Kufezekisile iingcali ze-IT kunye nabaqulunqi bezinga lokufunda abafuna ukuqhubela phambili umsebenzi wabo kwiinkqubo zolawulo lwenkqubo. (CCNP) Ukuhamba kunye nokuchithwa kwezaziso kuvumela amandla okulungisa, ukuhlaziya, ukuqinisekisa nokuphanda iinkqubo ezikufutshane kunye nokusebenza ngokubambisana kunye neengcali kwiinkqubo zokukhusela ukhuseleko. Ikhosi yeCCNP ifanelwe abo abangenalo ngaphantsi komnyaka omnye wokuhlangana kolawulo lweenkqubo ezilungiselelwe ukukhuthaza iziphumo zabo kunye nokusebenza ngokuzimeleyo kwiinkqubo eziyinkqubo ezinzima.
I-CCNA iquka iingcamango ezibalulekileyo kwizikhokelo zolawulo. Kufuneka ukwazi malunga neenkalo eziphambili zeenkqubo zolawulo ngaphambi kokuzama Uviwo lweCCNP. Emva koqeqesho lweCNNP oluvelisayo, uza kuba nekhono lokwenza izabelo ezahlukeneyo, umzekelo, ukucwangcisa, ukubonisa nokuphanda i-WAN ne-LAN.
Inkqubo yeCCNP ingavuma amandla okwenza umsebenzi, ukulungelelanisa, ukutshekisha nokuphanda imiba kwiinkqubo ezikufutshane nakwiindawo ezibanzi. Ukwenza le khosi, kubalulekile ukuba ungabi ngaphantsi kwexesha lokuhlangana kweenkqubo zolawulo. Abantu abathi banokugqiba le khosi baye babonisa amandla abo ukuba bazalise njengezikhokelo zeengcali, oonjiniyela abanonophelo, abalungiselela ootitshala kunye neenjineli zenkqubo.
Uqeqesho lufanelekileyo kakhulu kwiiNgcali zeeNethiwekhi, iiNjineli zoNxibelelwano, abaPhathi beNethiwekhi, iiNkxaso zeNethiwekhi, iiNjini zoNxibelelwano, abaPhathi beNethiwekhi, abaNxibelelwano beNkqubo kunye nabaNxibelelwano beNethiwekhi. Ngaphambi kokuqhuba le khosi, kufuneka ukuba ukwazi i-Networking Technologies, i-CCNA kwaye ngokubanzi kufuneka kube nokufunda ngokubalulekileyo kwezixhobo zokulawula. Ukufundwa kwe-TCP / IP kuyadingeka, kwaye ukubandakanyeka komnyaka we-1 kwiinkqubo zolawulo kuya kuba yinzuzo eyongeziweyo.
Ukuba nesatifikethi seCCNP ngokuqinisekileyo kubonisa izinga lezinga ekulawuleni ukutshintshana nokulawula, njengoko kushiwo ngaphambi kwayo yonke into. Xa ufuna umsebenzi kumthengi wokugqibela, umhlanganisi wesikhokelo eCisco wenza le mpendulo ibe yimpumelelo. Kuzo zonke iinjongo kunye neenjongo ezinyanzelekileyo ukufumana isatifikethi ukwenzela ukuba usebenze nomhlanganisi okanye kwiCisco. Kwaye kwakhona, kusenokuba luncedo olufanelekileyo xa usebenzisana necala labathengi, kufana nokuqinisekiswa.
Isatifikethi sinceda abadlali abancedisayo ukuba babekwe ngempumelelo kwizikhokelo zokulawulwa kwezikhokelo. Ingakumbi, iguqula umsebenzi wokusabalalisa ukufunda malunga nezikhokelo zokulawula kwihlabathi elikhoyo.
Esi siqinisekiso siya kubandakanyeka ukuba ube nelungiselelo elingcono ngokubhekiselele kunomvuzo onokuhlawulwa kuwe njengengcali. Kuya kukunceda ngokunjalo nangengcamango yokulawula isikhokelo semimandla yokuba imibutho eyahlukeneyo isetyenziselwe ukuhlawula. Ngokufanayo unako ukuhamba ngeeyure eyongezelelweyo uze uthathe uvavanyo lwezitifiketi zezwi oluya kukunika amandla okulawula zombini ilizwi kunye nedatha kunoma yimuphi ulwahlulo lwe-telecom.
Phakathi kweli khosi, kukho iziqinisekiso zokulawula iinkqubo ezifundiswa kumsebenzi, umzekelo, ukuzisa, ukuhlela, ukuqhuba nokuphanda iinkqubo ezahlukeneyo zokulawulwa kweenkqubo kwii-LAN nase-WANs.
Ukongeza ukwazisa olunye kule khosi eqinisekisiweyo yokhuseleko lweCCNP, okongezelela ukuba i-sub-order order yeCisco iqinisekisile ukulungiswa kobuchule. Abantu abafuna ukulandela le nkqubo yokukhusela baya kufumana amaninzi emisebenzi yokuvula kwimarike. Ngaphandle koko, i-CCNP Voice yongeza into ebalulekileyo yenkalo jikelele ekhupha nenani elikhulu labantu emhlabeni.
I-CCNP R & S iyimimiselo phakathi kwezona zinto zikhangele ukulandela izatifikethi zokuphatha iinkqubo kule mihla. I-degree up information kunye nokuvunyelwa kwamava athathweyo kubalulekile kwimiboniso enzulu yobutsha.
Okwangoku, xa ukhuseleko lwe-intanethi yinto ekhuni kunayo yonke, kufuneka ufumane iziqinisekiso ezininzi kwiinkalo ezifanisayo. Ithemba eliphambili lokugcina ukhuseleko. Xa ufumana esi siqinisekiso, unokukwazi ukufumana ukhuseleko lwe-intanethi ngubani onokukunceda iintloko zezorhwebo, abantu, iziseko kunye nemibutho evela kwiingozi ezinobungozi njengabalingisi kunye nezifo.
Okungaphezulu okanye ngaphantsi, imali kunye nokuzaliseka komsebenzi ziinjongo ezimbini ezibalulekileyo emva kweengcali zokukhetha le khosi. Xa befuna ukuzithumela kwiinkqubo zolawulo lwenkqubo, kunjalo ngokunjalo nekhosi epheleleyo. Kuzalisekisa ukwazi indlela ukulawulwa kweenkqubo ezininzi kuqondwa ngayo. Ukhuselo lweWebhu yintsimi ekhankanywe ngokukhethekileyo enesidingo esinzulu seengcali.
Innovative Technology Solutions ngumboneleli ogqwesileyo weekhosi eziqeqeshwe ngokufanelekileyo kwimibutho. Uqeqesho olukhulu kwiinkqubo zolawulo luvumela iingcali ukuba zandise zonke iinkcukacha kunye nemigangatho ebalulekileyo kubathengi abanomdla.
Indlela yokuphumeza iNkqubo yoNxibelelwano kwiCisco Devices